Fisamborana misesisesy :: Misy mikasa hamono ny Filohan’ny Repoblika • AoRaha
Naboraky ny Tonia mpampano lalàna amin’ny Fitsarana ambony, Razafiarivony Berthine (etsy amin’ny sary) nanoloana ny mpanao gazety omaly hariva ny fisamborana olona maromaro, Malagasy sy vahiny, noho ny fikasana hamono ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry sy tompon’andraiki-panjakana ambony hafa. Mitohy ny famotorana lalina momba an’ity raharaha ity.
Nampahafantarin’ny Tonia mpampanoa lalàna amin’ny Fitsarana ambony, tetsy amin’ny birao fiasany tetsy Anosy hatrany ny fisian’ny drafitra maty paika novolavolain’ireo andian’olona manohintohina ny filaminan’ny firenena izao. « Manana drafitra maty paika hoentina hamonoana tompon’andraikitra ambony izy ireo, ka voalohany ao anatin’izany ny Filoham-pirenena, araka ny porofo eo am-pelatanana », araka ny tatitra nataon-dRazafiarivony Berthine.
Nanomboka afak’omaly talata 20 jolay ny fisamborana an’ireo andian’olona voarohirohy. Isan’ireo tazonin’ny mpanao famotorana ny manamboninahitra frantsay, izay samy misahana andraikitra eto Madagasikara ny roa. Tsy nety nanome ny antsipiriany amin’ny isa na ny mombamomba an’ireto teratany vahiny sy malagasy voasambotra ireto ny Tonian’ny mpampanoa lalàna amin’ny Fitsarana ambony, omaly. « Ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka isika amin’izao fotoana izao sady ho fanajana ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana no tsy hanambaràna zavatra hafa ankoatra an’ireo. Homena amin’ny manaraka eo ihany ny tohin’ny raharaha », hoy fotsiny izy.
Loharanom-baovao iray akaikin’ny Filohan’ny Repoblika no hany nahenoana omaly fa « nomanina nandritra ny volana vitsivitsy izao fikasana hifofo ny ain’ny Filohan’ny Repoblika izao. Eo ihany koa, araka ny fanampim-panazavan’io loharanom-baovao io, ny fikasana hanongana ny Fanjakana ary hanomana ny fametrahana fitondrana tetezamita aorian’izany. Manamboninahitra efa nitarika fanonganampanjakana tamina firenena maromaro taty Afrika ny iray amin’ireo nosamborina teto amintsika, tamin’ny talata hariva ».
Mampifandray ny toe-draharaha tamin’ny fisiana hetsik’ireo fikambanan’ny Malagasy monina any Frantsa sy atsy La Réunion, izay mitaky ny fialan’ny Filoham-pirenena tamin’iny faran’ny herinandro iny mihitsy ireo akaiky ny Filoha. Niparitaka tamin’ny tambajotra Facebook an’ireo mpila ravinahitra any Frantsa ireto omaly alina sahady tokoa ny fanoherana ny fisamborana an’iretsy Frantsay iretsy. «Ho hita eo ny tena marina momba an’ity raharaha ity rehefa vita ny fanadihadiana. Ireo ihany koa aloha no zavamisy azo ambara », hoy indray itsy loharanom-baovao itsy.
Antenimierampirenena :: Hampitain-davitra ny fivorian’ireo depiote